Verenga izvi usati wavaka chatbot - NewGenApps
Verenga izvi usati wavaka chatbot
Kugadzira chatbot hachisi chimedu chekeke. Kunyangwe ichokwadi kuti chero munhu anogona kugadzira bot, zvakare zvakareruka kwazvo kukanganisa chiitiko chekutaurirana nevashandisi vakagadzirwa zvisina kunaka - iko kukanganisa kunowanzo kuve mune zvakadzama.
Paunenge uchigadzira chatbots, zvinokosha chaizvo kuva nehanya nazvo chatbot patani.
Nekudaro, isu takaunganidza rondedzero pfupi nzira dzinowanzo kuchengetedzwa dzinofanirwa kuteverwa nevanhu pavanenge vachigadzira chatbots.
Tsanangura zvakajeka zvinangwa uye zvishuwo
Nguva zhinji, kutaurirana nevatengi kunogadzirwa kunogadzirwa nebhod pane vanhu. Muchiitiko chekuti paine kusiyaniswa kwesarudzo kana sarudzo idzo mutengi anoda kutora ipapo zvinogona kuvimbika kushandisa zvine mutsindo, zvakakosha, uye zvekugadzira webhu interface yekutaurirana.
Kuremedza wako chatbot neunhu hunogona kukuisa mukuodzwa mwoyo. Hapana chikonzero chekuyedza kutora yako chatbot ace zvese zvisungo.
Kugadzirisa yako chatbot nechinangwa chekuti ikwanise kuita basa rimwe kusvika pakukwana kwayo inogonesa zvakanyanya pane kuve ne chatbot izvo zvinogona kugamuchira 5 kusvika ku10 zviitwa zvisina simba. Nguva dzose, yeuka, vanhu vanoda hutano, kwete huwandu.
Kamwe mune imwe nguva, unogona kunzwa kuti bot yako ine zvakawanda zvekutaura, uye iwe unoigadzira kuti inyorwe mirefu, inonetesa mameseji. Chero zvazvingaitika, vanhu havana hanya nekuverenga meseji dzakareba uye vanozoneta, kunyanya kana bot rako richitumira akawanda marefu meseji zvakateedzana. Zvibvunze wega - ndeipi nguva yekupedzisira kunyora meseji yakakura kudaro kushamwari kana kutarisirwa kuverenga meseji refu yandakagamuchira?
Seyambiro yakajairika, funga kukamura mameseji ako kuita mutsetse kana maviri kana vachida kutaura chimwe chinhu zvakanyanya - kana kunyangwe zvirinani, edza kupfuudza pfungwa yakafanana nerubatsiro rwemufananidzo. Fungidzira!
Chengetedza icho chakakosha, iyo bot inofanirwa kuve yakajeka nezve nhanho inotevera. Mutengi anofanira kuziva zvavanogona kutaura kufambisira mberi hurukuro.
Shingairira iyo bot zvakanyanya sezvinobvira
Pane tambo yakatetepa pakati pehunhu bot uye ne zvinoshamisa bot, uye iwe unogona kuyambuka nekupa bot yako imwe, chaiyo kuzivikanwa. Kungorongedza pamwe chete, akateedzana emhinduro pasina maitiro anozivikanwa ekutaura anosiya mutengi aine musanganiswa unonzwa.
Usambofa wakaregeredza kuita yako bot bot! Vashandisi vangasarudza kusanzwa sekunge vaitaura ne robhoti, kunyangwe ivo vachiziva kuti inofanirwa kunzwa kunge murume kumurume kutaurirana.
Iwe unogona kupa hunhu hwevanhu kune yako bot ine zita rinotonhorera. Tsvaga rakasarudzika uye zita remunhu webhodhi rako kuitira kuti vatengi vako vawane zviri nyore.
Pamusoro pezvo, dzidzisa yako bot nezvechako chaicho chinomiririra. Ita shuwa kuti bot rako raive nerumwe ruzivo nezve iro pachayo kutaurwa. Kunyanya, apo vashandisi pavanoedza kuwana rumwe ruzivo nezve rako zita re bot, zera kana icho chikuru chinangwa. Saka, yeuka kuti bot rako rinofanirwa kupa chikafu kune ese emibvunzo.
Kugadzirisa chiyero chemushandisi
Zvisinei nezve chokwadi chekuti kune imwechete-mirairo yaunoshandisa Natural Language Processing (NLP). Izvi zvinodaro nekuti zvakaoma kufungidzira mumafomu mangani mushandisi anogona kuita mubvunzo.
Nekudaro, pamabasa asingawanzoitika kana kamwechete zvakakosha kuti uwane imwe nzira yekumanikidza huwandu hwemibvunzo iyo vanhu vachabvunza nekuita kuti rizi rijeke.
Nezvezviitiko zvakajairika, zvinofungidzirwa pachena "kugadzirira" mutengi padivi pemuchina. Zvekugara uchiita mabasa epamba sekuhodha chikafu kana kudzora runyorwa, mutengi anozoenderana neNLP.
chatbot nhaurirano dzinogona kufarira vatengi mukutenga chinhu chako uye kukudza kambani yako. Kana kune rumwe rutivi, vanogona kuvatsamwisa sezvinotyisa mabatiro evatengi. Zvakawanda chatbots nhasi sanganisira yekukurumidza mhinduro sarudzo ku- "Taura kune Mumiririri". Iyo isarudzo huru yekubvisa kuitira kuti mushandisi asarase kufarira.
Sekutaura chatbots ita kuti kudyidzana pakati pebhoti yako nemutengi kuvhurika, zvichiita kuti iwe unzwisise zvinodiwa nemutengi wako zviri nani uye utore ruzivo rwakakosha. Chinangwa chikuru chebhoti yako kupindura mibvunzo yemutengi wako. Nenzira iyi, ita shuwa kuti usatadzisa kupindirana, muchokwadi, kukurudzira.
Ziva makesi ekushandisa akanakisa muzviitiko zvevatengi uye chengetedza kuyerera kwekutaurirana. Kazhinji, kune vakasiyana vanobatana vanobatanidzwa, vachichinja-chinja vachivimba nemutengi, zvisinei, inodarika. bhizimisi uye IT.
Pamusoro pezvo, iwe unofanirwa kugara uchipa nzira yekupedzisa nhaurirano nebhoti uye kuchinja kune munhu.
Yakashata yekuwedzera protocol
A chatbot pasina mubvunzo vanogona kutaurirana nevatengi uye nekuvabatsira kugadzirisa pane inoshanda sarudzo nekuvaratidza data kubva Database, zvichienderana neruzivo rwunopihwa nevatengi. Iwo mabhoti anogona zvakare kusvika kune yakaratidzwa chinangwa chemutengi achichengeta mundangariro chinangwa chekupedzisira kubvumidza kwakawanda kwakaringana kutsvaga nemhedzisiro. Ivo vanogona kuunganidza uye kumutsa pre-vakasarudzwa ongororo kune vatengi mukati mekudyidzana, tichifunga nezve kiyi izwi rinowanikwa mu data.
Nekudaro, kana chero maitiro akagadziridzwa zvakanyanya uye ane pundutso, semuenzaniso, kushambadzira, saka zvinogona kubatsira kuchengeta munhu mutambo. Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti sei uye kupi kwauchashandisa yako chatbot kuitira kushanda bhizimisi miitiro.
Mepu nzira dzakakosha dzekubatanidzwa nechinangwa chekuti bot yako inonyatsoziva zvekuita mumamiriro aya. Rongedza nzira idzi sedzako chatbot inosangana nemamiriro matsva uye inounganidza ruzivo, semuenzaniso, mibvunzo mitsva. Gara uchigadzira yako chatbot's Database kuitira kuti zvinodiwa zvekukwira zvidzikire, zvichipa vashandi mukana wakawanda wekusimudzira mabasa akaremerwa.
Most chatbots rinoshandiswa mumabhizinesi richiri kuda kutariswa nevanhu uye kureverera kuti vagadzire mhedzisiro yakanakisa yekuzvipira. Usambofa wakatumira a chatbot pasina kumisikidza nzira yekukwirisa iyo yaanogona kutungamira nayo zvinonetsa mutengi zvinonzwisisika kune vanhu vakagadzirira kugadzirisa nyaya dzakadai.
Chatbots inogona kushandiswa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, asi chimwe chikonzero chakakosha icho masangano anoda chatbots ndezvekupa zvakavimbika mabatiro evatengi uye kuchengeta mutengi achibatanidzwa. Chatbots kuwedzera ruzivo rwevashandisi uye kuwedzera kukosha kwesangano. Panguva iyo mutengi ane kubatanidzwa kwakanaka nesangano, ivo, pakupedzisira, vanozoshanduka kuva mutengi akavimbika we, zvakanaka, makore anotevera.
Ramba uchifunga kuti zviitiko zvevatengi zvinoramba zviri chinhu chakakosha chinozowedzera kubudirira kana kukundikana kwako chatbot nzira. As chatbots tungamira kune mwero, akawanda anogamuchirwa maitiro eUX uye budiriro inosimuka. Pamwe mashoma epamusoro ekudzivirira achave akakosha kwauri maererano nekuziva nyaya dzinotsausa kubva kune yako bots UX.
Uri kutarisa a chatbot enyu bhizimisi? Bata uku tikubatsire
Nyorera kuNewsletter yedu yeZvekuvandudzwa kwazvino, Special Discounts, nezvimwe zvakawanda.
Chatbots muBhangi & Indasitiri yemari
Apr 18 | Banking & Finance, Chatbots
Zvemari chatbots ndeye AI-inotyairwa software yakagadzirirwa kuita akasiyana mabasa uye kupindura kune mushandisi zvikumbiro kuburikidza nenzira dzakasiyana- munzira yemunhu.
Ramangwana rebasa nemaotomation uye chatbots
Apr 13 | kushandisa michina, chatbot
Iyo ramangwana reCRMs
Jan 4 | chakagadzirwa Intelligence, Chatbots, CRM, Kuvimbika kwevatengi, Machine Learning, Kufanotaura Ongororo, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Iyo ramangwana reVatengi Vehukama Hwekushandisa maturusi uye maitiro eArtificial Intelligence uye Kudzidza kweMuchina zvinokanganisa maCRM